Lego Creator Expert 10269 Harley-Davidson Fat Boy ဒီဇိုင်နာများသည်လျှို့ဝှက်ချက်များကိုဝေမျှကြသည်
23 / 08 / 2019 23 / 08 / 2019 ဂရေဟမ် 1033 Views စာ0မှတ်ချက် 10269 Harley-Davidson ဆီ Boy, Lego, Lego Creator Expert, YouTube ကို
အသစ် Lego ဒီဇိုင်နာဗီဒီယိုကိုဘယ်လိုဖော်ပြသည် Lego Creator Expert 10269 Harley-Davidson ဆီ Boy တီထွင်ခဲ့သည်
ပရိသတ်များဘယ်လိုရှာတွေ့နိုင်ပါသည် Lego Creator Expert 10269 Harley-Davidson ဆီ Boy မှာဒီဇိုင်းခဲ့သည် Lego အုပ်စု၏ရုံးချုပ်artနောက်ကွယ်မှနောက်ခံဗီဒီယိုအသစ်တစ်ခုကြောင့်ဘီလ်ဘတ်၌ရှိသူများ။ သုံး Lego ဒီဇိုင်းကျွမ်းကျင်သူ Mike Psiaki၊ အကြီးတန်းဒီဇိုင်းပညာရှင် Carl Merriam နှင့် Element Designer Mani Zamani တို့သည်ဗွီဒီယိုတွင်ပါ ၀ င်သည်။
အဆိုပါ Read Brick Fanatics အစုံ၏ပြန်လည်သုံးသပ်.
“ အင်ဂျင်ပိတ်ပင်တားဆီးမှုကိုမတူညီသောဒြပ်ပေါင်း ၂၀ ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်ကိုသင်တွေ့ရမည်။ ဒါကြောင့်အဲဒီဒြပ်စင်နှစ်ခုကိုအတူတကွစုစည်းတိုင်းသည်းခံမှုမှာနည်းနည်းလေးကွာခြားမှုရှိတယ်၊ အရာဝတ္ထုတွေဖမ်းမိနိုင်တဲ့အနားတွေရှိတယ်၊ ဒါကြောင့်ငါတို့အုတ်တွေထဲမှာမစုံလင်မှုတွေအားလုံးတောင်မှချောချောမွေ့မွေ့ရွေ့လျားနိုင်တဲ့ပစ္စတင် ဦး ခေါင်းလိုတယ်။ ရှင်းပြသည်။
“ ဒါနဲ့ကျွန်တော်တစ်လှည့်ပတ်လမ်းလျှောက်ခဲ့တယ်။ ဒီအဆောက်အ ဦး ရဲ့ကြီးမားတဲ့အပိုင်းက element ဂိုဒေါင်တစ်ခုဒါမှမဟုတ်စာကြည့်တိုက်ပဲ။ ငါတို့မှာဒီအကန့်တွေထဲမှာအုတ်တွေအများကြီးရှိတယ်၊ စင်ပေါ်တိုင်းငါဖြတ်သန်းခဲ့တယ်။ တောင်မှဒီတက်အောင်မ - ကစာသားနောက်ဆုံးစင်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ငါပုံမှန်အားဖြင့်aကဲ့သို့သော string ကိုပူးတွဲရန်အသုံးပြုသောဤ spool အပိုင်းအစကိုငါတွေ့ပြီ Lego City မင်းမှာကြိုးတစ်ချောင်းမှာတပ်ဆင်လို့ရတဲ့ရဟတ်ယာဉ်တစ်စီးပါ၊ ဒါကမော်ဒယ်လ်အတွက်အရမ်းကိုတော်ပါတယ်။ ”
LEGO Design Manager Jamie Berard နှင့်မိတ်ဆက်ပေးမည့်သီးသန့်တွေ့ဆုံမေးမြန်းခြင်းကိုဖတ်ပါ.
← LEGO VIP ဆုသစ်များသည်မော်ကွန်းတိုက်ထဲသို့ ၀ င်ရောက်သည်
Lego ခရစ်စမတ် Ideas DK ကနေလာမယ့်စာအုပ် →